Eziphathekayo Mobile prefabs Isikhongozelo House kunye lokuhlambela (Isikhongozelo Home) - China Qingdao Xinmao ZT Steel
Steel Isakhelo Structure Workshop Buildings
Eziphathekayo Mobile prefabs Isikhongozelo House Indlu yangasese ...
Eziphathekayo Mobile prefabs Isikhongozelo House kunye lokuhlambela (Container Home)
Inkcazo: seemodyuli ephathwayo indlu umgqomo ilungiselelwe ngokuvisisana nengcombolo ekuthuthweni container kanye. It wenziwe ngentsimbi ukukhanya zethutyana njengoko panel isakhelo kunye isonka esihlohliweyo ngexesha udonga nophahla, ngoko nokongezelelwa iifestile, iingcango, ukutyibilika, isilingi, kunye nezinye izincedisi ezongezelelweyo. Bona afakelwe ngamandla nokulayita kwaye accessorized ukuze zilungele iimfuno zakho. IKhabhinethi isakhiwo unit ukuqaliswa kwe zentsimbi kunye c ...
Seemodyuli ephathwayo indlu umgqomo ilungiselelwe ngokuvisisana nengcombolo ekuthuthweni container kanye. It wenziwe ngentsimbi ukukhanya zethutyana njengoko panel isakhelo kunye isonka esihlohliweyo ngexesha udonga nophahla, ngoko nokongezelelwa iifestile, iingcango, ukutyibilika, isilingi, kunye nezinye izincedisi ezongezelelweyo. Bona afakelwe ngamandla nokulayita kwaye accessorized ukuze zilungele iimfuno zakho. IKhabhinethi isakhiwo unit ukuqaliswa kwe zentsimbi kunye ngentsimbi ebandayo ibunjwe-welding, kunye ukwenza up amacandelo eqhelekileyo. Singayilwa Indlu kanye njengeyunithi nje omnye okanye idityaniswe yonke evela iibhokisi eziliqela, xa uqhagamshelo ezilula ezifana iibholiti. Ngoko ke kulula kwaye fast ukuba kufakelwe zezikhali.
Le projekthi ibe iqhutywe eSpeyin. It phakathi kwentaba kunye chibi, kude isixeko nengxolo. Oku kuquka 49 container yokuthumela. Uyilo yanamhlanje yenza indlu ejonge eziphambili kwaye ukhululekile ukuba baphile. Haveing ​​iholide kuwo kufuneka ezimnandi kakhulu kwaye ukhululeke.
Lena yokutyela. Wena ungaba ezinye ikofu nokuba isidlo lakho apha.
20FT / 40FT SEEMODYULI eziphathekayo Container House Izikhankanyi
ubukhulu lwangaphandle 6058mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) / 12116mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H)
kwikona yendlu steel ukukhanya olwalusele
panel Roof Rock Uboya / EPS panel nesonka (ngokwemfuneko umthengi)
Panel Rock Uboya / EPS panel nesonka (ngokwemfuneko umthengi)
base Ground steel ukukhanya olwalusele
window PVC ngokuhambisa iifestile okanye window aluminium ingxubevange okanye window zentsimbi seplastiki
Door Panel isangweji Streel okanye ucango panel isonka isakhelo aluminiyam.
nophahla False PVC busebenze
sys Electricity 2 izibane & 1 utshintsho
ezongezwayo zokuzikhethela Ifenitshala ye zokuphila izindlu, i-ofisi, yokulala, yangasese, Kitchen, lokuhlambela, Shower, njl
isicelo Living ndlu, ofisi, yokulala, yokupaka, ivenkile, umnquba, kwivenkilana, igumbi yokuhlangana, sidliwe, njl
Ubukhulu Elungiselelweyo amukelekile.
(1) ekulayisheni Baqukana kunye nokuthuthwa
One 40FT HC umthwalo 2 iiseti ndawonye indlu bhotile dimension- 5850mm * 2250mm * 2500mm
(2) Flat-pack zokuhamba:
Plan A: One 20FT GP umthwalo 4 iiseti iinyawo 20 isikhongozeli izindlu
Plan B: Enye 40FT HC umthwalo 8 ubeka iinyawo 20 isikhongozeli indlu okanye 4 iiseti iinyawo 40 container indlu.
Zonke zolawulo okhuselwe nge-bhanya eBhayi, kunye nesakhiwo intsimbi babenobuzwe ngombhinqo yokwaluka. Accessories ziya swi ibhokisi iphepha okanye kwiingxowa zeplastiki. Iifestile neengcango aya kupakishwa ibhokisi ngomthi.
Qingdao Xinmao ZT Steel Construction Co., inkampani Ltd yenye inkampani esekwe kakuhle banamava ezizodwa imveliso izindlu ezahlukeneyo kwakhiwe izindlu container nomgangatho elungileyo kunye nexabiso kukhuphiswano. Yasekwa ngonyaka ka-2003 abasebenzi abangaphezu kwama-50 R & D kunye ngaphezulu kwama-400 abasebenzi inkxaso ukuba ukufumana isabelo kwimarike enkulu. Inkampani yethu ufumene isiqinisekiso umgangatho ngezizwe ISO9001 kunye Ulwakhiwo Steel Construction Qualification Certificate Ibanga II.
40 Ziinyawo Isikhongozelo House
China Isikhongozelo House
Isikhongozelo House 40 Ft
Isikhongozelo House China
esongwayo Isikhongozelo House
esongwayo prefabs Isikhongozelo House
Flat Pack Lixabiso Isikhongozelo House
Flat Pack Isikhongozelo House Sale
Flatpack Isikhongozelo House
Flatpack Living Isikhongozelo House
High Umgangatho 20ft Isikhongozelo House
Ocean Shipping Isikhongozelo House
prefabs Sea Isikhongozelo House
basarha Isikhongozelo House
Shipping Isikhongozelo House
Shipping Isikhongozelo House Building
Shipping Isikhongozelo House Sale
Solar Isikhongozelo House
Underground Container Izindlu
20 FT Modified Shipping Isikhongozelo House Isono ...
Ufakelo Site olwalusele Shipping Contai ...
Flat Pack 20FT Isikhongozelo House kunye Kitchen, Wa ...
Smart basarha Mobile Shipping Container H ...
Sandwich Modern Panel Flat Economic Pack prefabs ...
Prefabs prefabs Flat Pack Isikhongozelo House for Ind ...